သင့္အိမ္မွာ ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ဘက္စံုသံုးလို႔ရတဲ့ မုန္႔ဖုတ္ဆိုဒါ - Thadin
[ April 25, 2019 ] ခြၽတ္ရခက္ၿပီး ဂြၽတ္တက္ေနတဲ့ လည္ပင္း ကေခ်းေတြကို မိနစ္၂၀အတြင္း ေပ်ာက္သြားေစမယ့္နည္း…! အလွပက႑
[ April 25, 2019 ] သံပုရာသီးေရေႏြးစိမ္ရည္ကို တစ္ႏွစ္ၾကာေသာက္ျပီးေနာက္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ…! HEALTHY
[ April 25, 2019 ] ႏိုင္ေအာင္ တိုက္မယ္လို႔ ေအေအ ေခါင္းေဆာင္ ေျပာ…!(ရုပ္သံ) NEWS
[ April 25, 2019 ] တည္ၿမဲတဲ့ Rs တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ … ဒါေလးေတြ သိထားဖို႔လိုမယ္ေနာ္…! RELATIONSHIP
[ April 25, 2019 ] သမီးရဲ႕ရည္းစားလား? သမီးရဲ႕ လင္လား? လာရဲရင္ လာခဲ႔ၾက…! NEWS
HomeHEALTHYသင့္အိမ္မွာ ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ဘက္စံုသံုးလို႔ရတဲ့ မုန္႔ဖုတ္ဆိုဒါ
September 9, 2018 Kay Kay HEALTHY Comments Off on သင့္အိမ္မွာ ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ဘက္စံုသံုးလို႔ရတဲ့ မုန္႔ဖုတ္ဆိုဒါ
စတိုးဆိုင်ကနေ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး မဝယ်နိုင်သေးရင် ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုကြည့်ပါ။ ပုလင်းအလွတ်တစ်ခုထဲမှာ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါအနည်းငယ်နှင့် ရေကိုရောနှောပါ။ ချိုင်းကိုလိမ်းပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းပဲ ခြေထောက်အနံ့ဆိုး ထွက်တာကိုလည်း ဖယ်ရှားပစ်လို့ရပါတယ်။
ရင်ပူတာ ပျောက်စေဖို့ သင်သည် ရေဖန်ခွက်တစ်ဝက်နဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်စားဇွန်း၁ဇွန်းကို ရောနှောပြီး သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အနည်းငယ်ကို နို့နည်းနည်းနှင့် ဖျော်သောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်အောက်ပါအညွန်းအတိုင်းလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရေ ၁၀၀မီလီ(၃.၄အောင်စ) ၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါလက်ဖက်စားဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံခန့်၊ citric acid လက်ဖက်စားဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံခန့်(သို့မဟုတ်) သံပုရာဖျော်ရည်အနည်းငယ်၊ သကြား လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဝက်။
နည်းလမ်း(၂)။ ဆားဝက်ခြံတွေ ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်စားဇွန်း၁ဇွန်း၊ ပျားရည် လက်ဖက်စားဇွန်း ဝ.၅။ ဟင်းရွက်ဆီနည်းငယ် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ရောနှောပြီး ဆားဝက်ခြံဖြစ်တဲ့ နေရာတွေကို ၅မိနစ်လောက် လိမ်းထားပေးပါ။ပြီးနောက် နှိပ်နယ်ပြီး ဆေးကြောလိုက်ပါ။
နည်းလမ်း(၃)။ အရေးအကြောင်းတွေနဲ့လိုင်းတွေကို လျော့ချဖို့။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်စားဇွန်း၂ဇွန်းနှင့် အုန်းဆီ လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ဇွန်းကို ရောနှောပါ။ ၅မိနစ်၊ ၇မိနစ်လောက် သေသေချာချာ သင့်မျက်နှာကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးနောက် ရေနွေးနွေးနဲ့ ဆေးကြောပါ။ တစ်ပတ်ကို ၁ကြိမ်-၂ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ဇွန်းနှင့် သံပုရာရည်ကိုရောနှောပြီး ရေ ကိုခွက်တစ်ဝက်ထည့်ပါ။ သင့်ပါးစပ်က မနှစ်မျို့ဖွယ်ရာ အနံ့တွေ နံနေလျှင် ဒီပျော်ရည်နှင့် ခံတွင်းကို ဆေးကြောပေးပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃-၄ဇွန်း နဲ့ ရေကိုဖျော်ပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငါးတွေ ကိုင်တဲ့အခါ လက်နဲ့ စင်းနှီတုံးမှာ အနံ့စွဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအနံ့တွေပျောက်ဖို့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ ပွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်နဲ့ ခြေထောက်အသားအရေတွေ ကြမ်းတမ်းနေရင် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့် ရေနွေးနွေးကိုရောပြီး သင့်လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေကို စိမ်ပါ။ တစ်ပတ်ကို ၂ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ။
ရေနွေးနွေး တစ်ဖန်ခွက်အတွက် ဆား လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ဇွန်း၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်စားဇွန်း၁ဇွန်း အသုံးပြုပြီး ၁၅မိနစ်၊ မိနစ်၂၀လောက် တစ်နေ့ကို ၂ကြိမ် အနာဖြစ်တဲ့ နေရာကို စိမ်ထားပေးပါ။
ပဲပြုတ်တဲ့အခါ အိုးထဲကို မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ပဲတွေနူးအိလာပါလိမ့်မယ်။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက သွားတွေကို ချေးချွတ်ပေးတာကြောင့် ဖြူဝင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏ မသုံးသင့်ပါဘူး။ သွားတိုက်ဆေးထဲ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း သင့်သွားကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ စိုစွတ်တဲ့ သွားတိုက်တံပေါ်မှာ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အနည်းငယ်ဖြူးပြီး သံပုရာရည် ၂စက်၃စက်ထည့်ပြီး တိုက်ပါ။ ခါတိုင်းထက်ကို ပိုပြီး သန့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်။
ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ . . .ေသာ္မွ . . . အပိုုင္း (၁)
This Month : 41400
This Year : 182857
Total Users : 541881
Total views : 2452712